कोरोनाभाइरसविरुद्धको युद्धः मोडेर्नाको खोपले जगाएको आशा, पूरा पढ्नुहोस् । - News21Nepal
कोरोनाभाइरसविरुद्धको युद्धः मोडेर्नाको खोपले जगाएको आशा, पूरा पढ्नुहोस् ।
November 17, 2020 November 18, 2020 news21nepalLeaveaComment on कोरोनाभाइरसविरुद्धको युद्धः मोडेर्नाको खोपले जगाएको आशा, पूरा पढ्नुहोस् ।
मोडेर्ना कम्पनीले निर्माण गरिरहेको कोरोनाभाइरसविरुद्धको सम्भावित खोप भाइरसविरुद्ध ९४.५ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । भाइरसविरुद्ध यति धेरै प्रभावकारी देखिएको यो दोस्रो अमेरिकी खोप हो । गत हप्ता मात्र अर्को अमेरिकी कम्पनी फाइजरले आफ्नो प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा आफूले निर्माण गरिरहेको खोप भाइरसविरुद्ध ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएको दाबी गरेको थियो।
त्यस्तै, मोडेर्नाको खोप फ्रिजरमा ३० दिनसम्म राख्न सकिने कम्पनीले सोमबार जनाएको छ । उता, फाइजरको खोप भने फ्रिजरमा मात्र ५ दिनसम्म मात्र राख्न सकिने बताइएको थियो।
कम्पनीले खोपको गम्भीर साइडइफेक्ट पनि नरहेको जनाएको छ । खोप दिइएका थोरै मानिसमा केही समय टाउको दुख्ने र जिउ दुख्ने समस्या देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । खोपको सुरक्षाबारे थप तथ्याङ्क संकलन गरेर यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले प्राधिकारका लागि अमेरिकी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा आवेदन दिने योजना बनाएको छ । फाउचीले डिसेम्बरको अन्त्यतिर कोरोनाभाइरसविरुद्धको पहिलो खोप उपलब्ध हुने बताएका छन् ।
Tagged कोरोनाभाइरसविरुद्धको युद्धः मोडेर्नाको खोपले जगाएको आशापूरा पढ्नुहोस् ।
तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ?हेर्नुस् आजको पूरा रासिफल ।
बाइडेन चार राज्यमा अगाडि, जितको घोषणा नगर्न ट्रम्पको चेतावनी, अब के होला? पूरा हेर्नुस ।
November 7, 2020 November 7, 2020 news21nepal
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन? आखिर के भने त ओलि ले सम्बोधन को पुर्न पाठ हेर्नुस् ।
October 23, 2020 October 23, 2020 news21nepal